ကမ္ဘာ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံး ကေတူး တောင်အကြောင်း - Thutazone
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်လို့ ဆိုလိုက်ရင် ဧဝရက်တောင် ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာဖြစ်ပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ကိုတော့ သိတဲ့သူနည်းမှာပါ။ တကယ်တော့ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ဟာ ဧဝရက်တောင်တည်ရှိရာ နီပေါနိုင်ငံရဲ့ မနီးမဝေး ပါကစ္စတန်နဲ့ တရုတ်နယ်စပ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
ဒီတောင်ကိုတော့ အတိုကောက်အနေနဲ့ K2 လို့ခေါ်ကြသလို Mount Godwin-Austen ၊ Chhogori စတဲ့ နာမည်တွေလည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ ပါကစ္စတန် မြောက်ပိုင်း Gilgit-Baltistan ဒေသ နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ Xinjiang ဒေသအစပ်မှာ တည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အများစု မသိကြတဲ့ K2 တောင်ရဲ့အကြောင်းကို သုတဇုန်မိတ်ဆွေများအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေသွားပါမယ်။
K2 တောင်ဟာ အမြင့် ၈၆၁၁မီတာရှိပြီး ဧဝရက်တောင်က ၈၈၄၈မီတာရှိတဲ့အတွက် ဧဝရက်တောင်က၂၃၇မီတာပိုမြင့်ပါတယ်။ ဧဝရက်တောင်က ဟိမဝန္တာတောင်အစုမှာပါဝင်သလို K2တောင်က Karakoram တောင်အစုမှာပါဝင်ပါတယ်။ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များရဲ့စစ်ဆေးချက်အရ K2တောင်သက်တမ်းဟာ နှစ်သန်းပေါင်း ၁၁၅သန်း နဲ့ ၁၂၀သန်း ကြား ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။
K2 ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ ၁၈၅၂ခုနှစ်မှာ ဗြိတိန် မြေပြင်စစ်ဆေးရေးသမား T.G. Montgomerie က ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ T.G. Montgomerie ဟာ Karakoram တောင်အစု တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၁၀ ကွာဝေးသည့် ဟာရာ မုခ်တောင်မှ ပထမဆုံး တိုင်းတာခဲ့စဉ် Karakoram က အရှေ့စာလုံး K ကို K1နှင့် K2 ဟု ပွိုင့်နှစ်ခုကို မှတ်သားခဲ့ရာမှ ဒုတိယတောင်ထွတ်မှာစာရင်းသွင်းတဲ့ဒီတောင်ကို K2 လို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Mount Godwin Austen ဆိုတဲ့အမည်ကတော့ ၁၉ရာစု အစပိုင်းက ပထမဆုံးစစ်ဆေးရေးသမား Col. H.H. Godwin Austen ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chhogori ကတော့ ဒေသခံတွေကပေးတဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီး Chhogo ဆိုတာ ‘ကြီးမားသော’ ၊ Ri ဆိုတာ’တောင်’ ဖြစ်တာကြောင့် ‘ကြီးမားသောတောင် ၊ တောင်ကြီး’ လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
တက်ရခက်ခဲပြီးလူပေါင်းများစွာကို သေစေခဲ့တဲ့အတွက် K2 ကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောတောင် လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ တက်ရောက်အောင်မြင်သူ ၃၀၀ ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီး မအောင်မြင်ပဲသေဆုံးသူက ၇၇ ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေးယောက်တက်နိုင်တိုင်းမှာ ၁ယောက်သေဆုံးတဲ့နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးနှုန်း ဒုတိယအများဆုံးတောင်ဖြစ်ပြီး ပထမသေဆုံးနှုန်းအများဆုံးကတော့ ဒသမအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ Annapurna တောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Annapurna တောင်ကို ၁၉၁ယောက်တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီး ၆၁ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
K2 တောင်ကို ပါကစ္စတန်ဘက်ခြမ်းကရော တရုတ်ဘက်ခြမ်းကပါ တက်ရောက်နိုင်ပေမယ့် တရုတ်ဘက်ခြမ်းက တက်ဖို့အလွန်ခက်တဲ့အတွက် တောင်တက်သမားအများစုဟာ ပါကစ္စတန်ဘက်ကသာ တက်ကြပါတယ်။ တောင်တက်သမားတွေဟာ ရေခဲတောင်ပြိုတာတွေ ၊ နှင်းမှုန်တိုင်းတိုက်တာတွေ အမြဲဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ လုံးဝတက်လေ့မရှိကြပါဘူး။ အများဆုံးတက်ကြတဲ့လကတော့ ဇူလိုင်လ နဲ့ သြဂုတ်လတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တာဖြစ်ပြီး တောင်ထိပ်ပိုင်းမှာ အောက်ဆီဂျင်ဟာ ပုံမှန် ၃ပုံ၁ပုံတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ ဒုတိယအခက်အခဲကတော့ တစ်ခါတိုက်ရင် ရက်ပေါင်းများစွာကြာလေ့ရှိတဲ့ နှင်းမှုန်တိုင်းတွေရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး တတိယကတော့ မတ်စောက်လွန်းတာကြောင့် မကြာခဏချော်ကြနိုင်တဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်ကို ၁၉၀၂ခုနှစ်တည်းက တက်ရောက်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့် ၁၉၅၄ခုနှစ်ထိ မည်သူမှရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၅၄ခုနှစ်မှာတော့ အီတလီတောင်တက်သမား Ardito Desio ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ Achille Compagnoni နဲ့ Lino Lacedelli တို့ပါဝင်တဲ့တောင်တက်အဖွဲ့က ပထမဆုံးအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပထမဆုံးတောင်ထိပ်အထိ တက်ရောက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ ပိုလန်သူ Wanda Rutkiewicz ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အကြီးဆုံးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူကတော့ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာတက်ခဲ့တဲ့ အသက် ၆၅နှစ်အရွယ် စပိန်တောင်တက်သမား Carlos Soria Fontán ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၆ခုနှစ်ကတော့ K2 တောင်တက်သမားတွေ ကံဆိုးတဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း လူ ၁၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ဧဝရက်တောင်ကို အောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်ခန့်ရှိနေချိန်မှာ K2 တောင်ထိပ်ကိုတော့ ၃၀၂ဦးသာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတက်ခဲ့သူကတော့ ဗြိတိန်-အမေရိကန်တောင်တက်သမ Vanessa O’Brien ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၈ရက်နေ့ ၂၀၁၇ရက်နေ့တက်ရောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူမဟာ K2 တောင်ကို ပထမဆုံး ဗြိတိန်-အမေရိကန် တောင်တက်သမဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ K2 တောင်ကို အခြေခံပြီး Vertical Limit , K2: Siren of the Himalayas နဲ့ The Summit စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးပါတယ်။
3D အမြင်နဲ့ K2 တောင်ကိုတက်ကြည့်ချင်ရင် အောက်ကဗီဒီယိုကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။